तपाईको आज शुक्रवारको राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान ! « Sansar News
तपाईको आज शुक्रवारको राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान !
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार ०७:२६
वचन पुर्याउन नसक्ता अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ। बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले सहयोगीहरू टाढिन सक्छन् । अर्थ अभावले काम रोकिने सम्भावना छ। विगतको श्रमबाट सामान्य लाभ हुनेछ। आक्षेप लगाउनेहरूले दुःख देलान्। मानसम्मानमा पनि आघात पुग्न सक्छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई विशेष ध्यान दिनुहोला।
रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको अवसर जुट्नेछ। तर, स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सचेत रहनुपर्ला। पहिले दिएको वचन पूरा गर्न नसक्ता आलोचित बन्नुपर्ला। ईर्ष्या गर्नेहरूले पनि काममा बाधा पुर्याउन सक्छन्। अरूको विषयमा चासो राख्दा व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ। शुभचिन्तकले मात्र साथ दिनेछन्। मिहिनेत गर्दा नयाँ काम र सामान्य प्रतिफल प्राप्त हुनेछ।
२०७८ मंसिर १० गते, शुक्रवार, २६ नोभेम्बर २०२१